Akụkọ - Ngwa nke ikuku ikuku
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -eji ikuku mkpakọ maka ọtụtụ ọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ bụla nwere opekata mpe abụọ, na n'ime ụlọ nwere ike nwee narị narị ụzọ dị iche iche iji ikuku mkpakọ.
Ojiji gụnyere ike ngwaọrụ pneumatic, nkwakọ ngwaahịa na akụrụngwa akpaaka, na ndị na -ebugharị ya. Ngwá ọrụ pneumatic na-adịkarị obere, na-adị mfe ma na-emegharị karịa ngwa eletriki na-anya ọkụ. Ha na -enyekwa ike dị larịị, nke anaghị ebu ibu buru ibu. Ngwaọrụ nwere ikuku nwere ike maka ọsọ na-agbanwe agbanwe na njikwa torque, ma nwee ike iru ọsọ na torque chọrọ ngwa ngwa. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ahọrọkarị ha maka ihe nchekwa n'ihi na ha anaghị emepụta ọkụ ọkụ ma nwee obere okpomọkụ. Agbanyeghị na ha nwere ọtụtụ uru, ngwaọrụ ikuku na-adịchaghị ike karịa ngwa eletriki. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -arụpụta ihe na -ejikwa ikuku na gas agbagoro maka ịgba ọkụ na ịrụ ọrụ dị ka ọxịdashọn, fractionation, cryogenics, refrigeration, filtration, dehydration, and aeration. Tebụl 1.1 depụtara ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ na -emepụta ihe na ngwaọrụ, na -ebuga, na nhazi usoro chọrọ ikuku mkpakọ. Maka ụfọdụ ngwa ndị a, agbanyeghị, isi mmalite ndị ọzọ nwere ike ịdị ọnụ karịa (lee mpempe akwụkwọ nke akpọrọ Enwere ike Ikwesighi ekwesighi ekwesighi na Nkebi 2).
Igwe ikuku na-agbakọ ọnụ na-arụkwa ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ mpaghara na-anaghị emepụta, gụnyere njem, ihe owuwu, igwu ala, ọrụ ugbo, ntụrụndụ na ọrụ ọrụ. Ihe atụ nke ụfọdụ ngwa ndị a ka egosiri na tebụl 1.2.
Isiokwu 1.1 Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -eji ikuku mkpakọ
Ihe Nlereanya ụlọ ọrụ na -eji ikuku arụ ọrụ
Uwe Na -ebugharị, mwepu, ike ngwaọrụ, njikwa na ndị na -eme ihe, akụrụngwa akpaghị aka
Ngwaọrụ ụgbọ ala ike, stampụ, njikwa na ndị na -eme ihe, na -akpụ, na -ebuga
Chemicals Ozi, njikwa na ndị na -eme ihe nkiri
Nri Agụụ mmiri, igwu mmiri, njikwa na ndị na -eme ihe nkiri, na -ebuga, na -efesa ihe mkpuchi, nhicha, ịkwakọba oghere
Ngwongwo ụlọ Ike ikuku piston, ike ngwaọrụ, mgbachi, ịgba, njikwa na ndị na -eme ihe
Nrụpụta Izugbe Mkpuchi, stampụ, ike ngwaọrụ na nhicha, njikwa na ndị na -eme ihe
Osisi osisi na osisi Ịkwọ ụgbọ mmiri, ịwụnye, ịpịkọta, ọgwụgwọ mgbali, njikwa na ndị na -eme ihe
Ụkpụrụ ọla Ike ọdụ ọgbakọ, ike ngwaọrụ, njikwa na ndị na -eme ihe, ịkpụzi injection, ịgba
Mmanụ ala Mkpokọta gas, njikwa na ndị na -eme ihe
Ọla ndị isi Mgbaze agụụ, njikwa na ndị na -eme ihe nkiri, ịkwalite
Pulp na Akwụkwọ Ozi, njikwa na ndị na -eme ihe nkiri
Rubber na plastik Ngwaọrụ ike, mwekota, njikwa na actuators, akpụ, ebu pịa powering, injection ịkpụzi
Nkume, ụrọ, na iko Na -ebugharị, agwakọta, agwakọta, njikwa na ndị na -eme ihe, ịfụ iko na ịkpụzi, jụrụ oyi
Uwe akwa Ihe ọ liụ liụ na -akpasu iwe, njigide, ibuga, akụrụngwa akpaaka, njikwa na ndị na -eme ihe, ịkpa ákwà jet, ịkwa akwa, imepụta ederede
Isiokwu 1.2 Ngalaba na-anaghị arụpụta ikuku nke ikuku ikuku
Ọrụ ugbo Ngwa ugbo, njikwa ihe, ịgba ihe ọkụkụ, igwe mmiri ara ehi
Ngwuputa Ngwá ọrụ pneumatic, hoists, nfuli, njikwa na ndị na -eme ihe
Ọgbọ ike Malite turbines gas, njikwa akpaka, njikwa anwuru
Ntụrụndụ Ogige ntụrụndụ - breeki ikuku
Usoro ọmụmụ golf - ịgha mkpụrụ, ịkọ nri, sistemụ sprinkler
Ụlọ nkwari akụ - igwe mbuli elu, mkpofu nsị
Ebe ntụrụndụ ski - ime snow
Ụlọ ihe nkiri - nhicha ihe ngosi
Nchọgharị n'okpuru mmiri - tankị ikuku
Ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọrụ Ngwa ikuku, igwe nri, sistemụ breeki ikuku, igwe ịpị uwe, sistemụ iku ume ụlọ ọgwụ,
Ụgbọ njem njikwa ihu igwe
Mmiri na -ekpofu mmiri Ngwá ọrụ pneumatic, hoists, sistemụ breeki ikuku
Ọgwụgwọ Ihe nzacha agụụ, na -ebuga